कला/साहित्य – Janamanch.com
सन्तोषको बिहे हुँदैछ !
सुरञ्जन घिमिरे समयसँगै उसको बिहे गर्ने बेला भयो । घरबाट पनि बिहेका लागि दबाब आउन थालेपछि उसले बिहेको सोच बनायो र मानसिक रूपमा तयार भयो । तर, विडम्बना ! आजसम्म उसले कसैलाई प्रेमिका बनाउन सकेको थिएन । प्रेमिका बनाउन नचाहेको होइन तर विचरालाई कुनै केटीले पत्याएका थिएनन् । यसको पनि कारण थियो— ऊ फुक्काफाल..
अक्षर काका केही समयअघि चुनाव भयो । वामपन्थी गठजोडले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । अहिले मुलुकमा वामअधीनस्थ सरकार छ । सत्ता–सदन, गाउँ–नगरका सबै तहमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ । आश्वासनका रिकापीमा समृद्धिको सुस्वादु केक तयार छ । मनलाग्दी आस्वादित हुन सकिन्छ । मोनोदेखि मेट्रो रेलसम्मका योजना..
मेरो कोखको ‘खुसी’
अन्जु भण्डारी रमेश कोठाबाट एकनासले बोलाइरहेको थियो .. तर म नसुनेझै भान्छामा ब्यस्त भइदिए त्यो पनि बिना काम.. अनि उ पनि सदाको जस्तै रिसाएर भान्छामा नै आयो…. तिमीलाइ मलाइ सताउन निकै मन पर्छ है। आजभोली मैले बोलाएको पनि सुन्न छोड्यौ।पछाडि बाट अगालो हाल्दै बोल्यो उ। सताउछु मात्रै र? माया पनि त गर्छु त्यो पनि..
‘सरसर्ती संसार’ मा एक फन्को
भगवती बस्नेत जीवा लामिछाने भन्ने बित्तिकै गैरआवासीय नेपाली संघको सम्झना आउछ । उहाँले सिर्जना गर्नुभएको नियात्रा संग्रह 'सरसर्ती संसार' गैरआवासीय नेपाली संघको अभियान, व्यावसायिक तथा पारिवारिक भ्रमण निस्कदा आफूले देखेभोगेका पाँचै महा देशका अनुभव अनुभूतिलाई सदृश्य बयान गर्नु भएको छ । उहाँले वर्णन..